Akụkọ - Gịnị ka anyị kwesịrị ị attentiona ntị n'ubu anyị?
Akpịrị olu bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ mmadụ. Anyị enweghị ike ịrụ ọrụ ma zuo ike na-enweghị ya kwa ụbọchị. Dịka otu n'ime njikọ dị mkpa nke ahụ mmadụ, ubu na-agagharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile. Ahụ ike ya na-ekpebi ndụ mmadụ na ogo ndụ ya kpọmkwem. Iji ihe ọmaJirinụ Akanwere ike ijigide ma mee ngwangwa. Ọ bara uru iji ahụ ike.
Nkwado Ubun'echebe ọtụtụ ebe. Anyị na-ahụkarị ndị agadi, ndị na-eme egwuregwu na-eji ndị na-echebe ubu, na ụdị dị iche iche nke ndị na-arịa ọrịa, karịsịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa shuga na-achọkwa ndị na-echebe ubu iji chebe nkwonkwo.
Nkwado ubu nwere ike inye nkwado, nkwụsi ike, nchekwa okpomọkụ na ihe mgbu na anụ ahụ ndị gbara ya gburugburu nke nkwonkwo ubu. Okwesiri ike maka oke mgbu na-adịghị ala ala na mbufụt nke ọnya na-emebi emebi nke nkwonkwo ubu na mmerụ anụ ahụ dị nro, na ubu subluxation kpatara hemiplegia. Ọ nwere ike inye nkwado, nkwụsi ike, nchekwa okpomọkụ na ihe mgbu na anụ ahụ ndị gbara ya gburugburu nke nkwonkwo ubu. Okwesiri ike maka oke mgbu na-adịghị ala ala na mbufụt nke ọnya na-emebi emebi nke nkwonkwo ubu na mmerụ anụ ahụ dị nro, na ubu subluxation kpatara hemiplegia. Ọbụghị naanị na anyị chọrọ nkwado ubu iji wee na-ekpo ọkụ n'oge oyi, mana maka ndị ọrịa a, n'eziokwu, n'oge ọkọchị ọsụsọ, n'ihi ịnweta ọtụtụ oge na gburugburu ikuku ikuku, anyị chọkwara nkwado ubu kwesịrị ekwesị iji belata ibu njikọ. Na-emekarị, ihe eji eme ihe maka nkwado ubu n'ahịa bụ owu, ajị anụ, akpụkpọ anụ na ihe ndị agwakọtara. Owu: iku ume na hygroscopic, ma odi mfe ichikota mgbe asachachara ya. Mbelata mbelata dị ntakịrị, ihe dịka 4-10%. Nchebe ikpo ọkụ bụ izugbe, anaghị anagide ebu. Ajị anụ: The nkịtị ajị ákwà ubu support ihe onwunwe bụ ajị, oke bekee ntutu na kamel ntutu, wdg Ọ nwere elu ịhụnanya njigide, ma ya ikuku permeability deviates. Okwesighi ikesa ma ọ bụrụ na ọsụsọ na-agba ọsọ, ihe onwunwe ya na-egosi ahụhụ adịghị mma. Ọ na-enyekwa ndị mmadụ mmetụta nke ochie na akọrọ mgbe ha jisịrị oge. Akpụkpọ anụ: Anụ akpụkpọ anụ na-egbu ume, na-ekpo ọkụ karị, mana mmiri na-eguzogide mmiri; elu akpụkpọ anụ na-adịghị atụ egwu mmiri mmiri, mana ọ dara ogbenye na ikpo ọkụ na ikuku ikuku.